रोचक Archives - Filmy Hotline
लहानदेखि पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको चार किलोमिटर पश्चिममा पर्छ– फूलबारी चोक । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले धरै वनस्पति लोप भएको र मौसमअनुसार नफुल्ने र नफल्ने दाबी भइरहेको अवस्थामा पनि सिरहाको यो रूखमा भने वैशाख १ गतेकै दिन फूल फुल्दै आएको छ । पहिले भोटियाटोल भनेर चिनिने उक्त चोकदेखि करिब आधा किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि नौ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पुरानो तथा रमणीय वन भेटिन्छ । सयौँ वर्ष पुराना रूखहरू भेटिने उक्त वन नै हो लोकनायक सलहेसको फूलबारी । जहाँको दुईवटा रूखमा प्रत्येक वर्षको पहिलो दिन नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न तम्तयार भएर देखापर्ने गर्छ– माला आकारका सलहेस फूल । स्थानीय भाषामा ‘हारम’ भनिने ती दुईवटा रूखमा फुलेका फूलका माला चौधौँ शताब्दीका लोकनायक सलहेसलाई उनकी प्रेमिका मालिनीले लगाइदिने फूलको माला हो भनिन्छ । सलहेस गाथाका अनुसार, राजा सलहेस प्रत्येक दिन सिरहा सदरमुकामस्थित आफ्नो राजधानी महि
यसरी सुरु भएको थियो ‘अप्रिल फुल’ अर्थात् मूर्ख बनाउने दिन
अप्रिल महिनाको पहिलो दिन अर्थात् अप्रिल १ मा संसारभर मूर्ख दिवस मनाइन्छ। यद्यपि संसारको कुनै पनि मुलुकमा औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाइँदैन। तैपनि यस दिन मानिसहरू एक-अर्कालाई मूर्ख बनाएर मनोरञ्जन गर्छन अर्थात् अप्रिल १ लाई ख्यालठट्टा गर्ने दिवसका रूपमा लिइन्छ। अप्रिल फुल किन र कहिलेदेखि मनाउन थालियो भन्ने कुराको कुनै आधिकारिक तथ्य उपलब्ध छैन। मध्यकालमा युरोपका धेरै सहरमा २५ मार्चका दिन नयाँ वर्ष मनाइन्थ्यो जुन अप्रिल १ मा अन्त्य हुन्थ्यो। सन् १५८२ मा पोप चाल्र्स नवौंले पुरानो क्यालेन्डरको स्थानमा नयाँ रोमन क्यालेन्डर लागू गरेपछि सन् १५८२ देखि नयाँ वर्षको पहिलो दिनका रूपमा १ जनवरीलाई कायम गरियो। त्यसपछि अप्रिल १ लाई नयाँ वर्ष मान्नेहरूलाई मूर्खको सज्ञा दिन थालिएको हो। आजकाे साप्ताहिक मा यो जानकारी छापिएको छ। अप्रिल १ मा मूर्ख दिवस मनाउनुको अर्काे कारण पनि छ। अंग्रेज साहित्यकार चान्सरको ‘
महिलाले खोज्ने यी १० कार्य थाहा छैन भने बुझ्नुस् सम्बन्ध धेरै टिक्दैन
काठमाडौं । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि केटीहरुले केटाको जस्तो यौनको बारेमा कल्पना गर्दैनन् । यदी त्यसो हो भने, तपाईं गलत हुनुहुन्छ । एक अध्ययनले हरेक स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहन्छन् । र मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठा अनौठा यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँछन् । केटीहरुले यौनको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोंच्छन् ? अपरिचितसँग सेक्सः अधिकाँश महिलालाई अपरिचित पुरुषले छुँदा नराम्रो लाग्छ । तर कतिपय समयमा अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्ने विषयमा महिलाहरु उत्तेजित हुन्छन् । अध्ययन भन्छ कि अपिरिचितसँग यौन सम्बन्ध राख्दा सबै सीमा भुलेर रमाइलो गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको सोंचाई हन्छ । आत्मसमर्पणः अधिकांश महिलालाई अपेक्षा हुन्छ कि कुनै पनि पुरुषले उनीसँग मालिक जस्तो ब्यवहार गरोस् । उठाएर ओच्छ्यानमा राखोस् र कपडा खोलेर क्रिडा गरोस् । अलि हेप्ने र होंच्याए
रोजगारीका लागि यी ५ देश जानुहोस्, भनिन्छ यी देशहरूमा भाग्य चम्किनेछ …कुन-कुन देश हेर्नूहोस !
काठमाण्डौ । प्राय मानिसहरु विदेशमा राम्रो नोकरी भेटाउन सकिन्छ कि भनेर खोजी गरिरहेका हुन्छन् । तर आर्थिक रुपमा बलिया देशहरुको नियम प्रवासी कामदारहरुका लागि निकै कडा हुन्छ । तर जुन देशमा यस्ता नियम सजिला र सहज हुन्छन्, त्यहाँ सजिलै राम्रो नोकरी समेत पाउन सकिन्छ । हामी आज तपाईलाई यस्तै केही देशहरुको बिषयमा बताउन गइरहेका छौ, जहाँ प्रवासीहरु जान तथा बस्न निकै सहज र सरल हुन्छ । साथै, अन्य देशको तुलनामा यी देशमा गएर काम गर्दा तलब समेत राम्रो पाइन्छ । खासगरी यस्ता देशमा त्यहाँको सरकारले न्यूनतम ज्यालाको कुनै सीमा राखेको वा तोकेको हुँदैन । यस्ता देशहरुको सरकार र उद्योग संचालक मिलेर कर्मचारीहरुका लागि कमसेकम कति तलब आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा तय गर्छन् । यी देशहरुमा उद्योगहरुबाट तय न्यूनतम तलब स्केल विश्वभरमै सबैभन्दा राम्रो न्यूनतम तलब दिने देशहरुको भन्दा पनि निकै धेरै हुन्छ । यसका साथै काम गर्नुपर्न
आफैँलाई गोली हानु अघि हिटलरले भनेका ३ कुरा !
बीबीसी । १९४५ पछि हिटलरको एउटै चाहाना थियो, आफ्नो मृत्युको तयारी गर्ने। २५ अप्रिलमै उनले आफ्ना अंगरक्षकलाई बोलाएर भनेका थिए, जस्तो म आफैले आफैलाई गोली हानेर मरे भने तिमीले मेरो मृत शरिलाई बगैचामा लगेर आगो लगाइदिनु। मेरो मृत्यु पछि कसैले मलाई नदेखुन र नचिनुन । त्यसपछि तिमी मेरो कोठामा जानु मेरो बर्दी, कागज र मैले चलाएका हरेक बस्तु जम्मा गर्नु र बाहीर आएर त्यसमा पनि आगो लगाइदिनु। बस् अटोग्राफले बनाएको फ्रडरिकको महान चित्र तिमीले नछुनु। जसलाई मेरो ड्राइवरले मेरो मृत्युपछि सुरक्षित बसर्लनबाट बाहीर लगेर जानेछन्। आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनमा हिटलरले जमिनको ५० फिट तल सुरुङ बनाएर काम गर्थे र त्यही सुत्ने गर्दथे। र कहिले काहिँ मात्र बाहिर आउने गर्दथे। जहाँ चारै तिर बमले ध्वस्त भएका भवन हुन्थे। हिटलरले मर्ने आत्महत्याकै दिन इवा ब्राउनसँग विवाह गरेका थिए। आफैलाई गोली चलाउनु अघि इवाले उनलाई छोडेर कतै
मोटी केटी पाउने पुरुष भाग्यमानी हुन्छ !
विवाहका लागि कुनै केटीको कल्पना गर्दा पक्कै पनि जिउडाल मिलेको सुन्दरयुवतीको तस्विर अगाडि आउँछ । महिला पनि आफू सुन्दर देखिन कम खाना खाने अर्थात ‘डाइटिङ’ गर्छन् । तर मार्टेनियामा सुन्दरताको परिभाषा फरक छ । यहाँ मोटाघाटा महिला सुन्दर मानिन्छन् । विवाहका लागि पनि मोटीलाई नै रुचाइन्छ । अफ्रिकाको उत्तर पश्चिमी मुलुक मार्टेनियामा विवाहका लागि मोटी केटी पाउनुलाई भाग्यको रुपमा लिइन्छ । यसले विविह पछि सम्पन्नता ल्याउने विश्वास समेत गरिन्छ । त्यसैले यहाँका महिलालाई मोटाउन दवाव दिइन्छ । जव बालिका आठ, नौ वर्षका हुन्छन्, उनीहरुलाई विवाह योग्य बनाउन आवश्यक भन्दा धेरै खुवाउने गरिन्छ । यदि खान नमानेमा कुटेर भए पनि खुवाइन्छ । यहाँ महिला जति धेरै मोटी हुन्छन्, त्यति नै सुन्दर मानिन्छ । एघारौं शताब्दिेखि सुरु भएको यो मान्यता अहिले पनि कायम छ । र महिला मोटो हुनुले उनीहरु सम्पन्न खानदानमा गनिन्छ । यो मान्यता
श्रीमानलाइ नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाइ प्रगती गर्न दिदैनन ! सबैले सेयर गरौ
श्रीमान्लाई नराम्रो सब्द बोल्ने हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाइ प्रगती गर्न दिदैनन ! चाहे जसले जे भनोस श्रीमान भनेका देवता हुन् ! श्रीमानहरु परिवारको लागि मर्न तयार हुन्छन ! आफ्नो श्रीमान लाइ जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने हेपेर बोल्ने चिच्याएर बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन, यो जानकारी सबै तिर फैलाउन यो पोस्ट सेयर गर्नुहोला ! यो पनि पढ्नुस: भनेजति पैसा नपाएपछि प्रेमीकाले गरिन् सोच्नै नसक्ने काम व्याइफ्रेण्डसँगको सम्बन्धमा धोका भएपछि एक युवतीले यस्तो कदम उडाइन्, जसलाई देखेर मानिसको होश उड्यो। २४ वर्षीया क्रिस्टिना कुछमा व्याइफ्रेण्ड ज्याटिलसँग छुट्टी मनाउन बहामास गएकी थिइन्। छुट्टी मनाउने क्रममा क्रिस्टिनाले आफ्ना व्याइफ्रेण्डसँग ब्रेकअप गरिन्। क्रिस्टिना एक रसियन मोडल हुन् र उनलाई आफ्नो कारोबार सुरु गर्नु थियो। व्याइफ्रेण्ड ज्याटिनले क्रिस्टिनाको कार
जाँच बिर्सनेदेखि जागिर छाड्नेसम्म, के छ पब्जीमा त्यस्ताे ?
काठमाडौँ, मध्यबानेश्वरस्थित चिकेन स्टेसन रेस्टुरेन्टमा तीन जना युवा मोबाइलमा झुम्मिरहेका थिए। मोटो फ्रेम भएको चस्मा लगाएका एक जना युवा भन्दै थिए, ‘त्यसलाई हान्–हान् !’ खैरो ज्याकेट लगाएर कुनापट्टि बसेका अर्का युवा थप्दै थिए, ‘मार्–मार्, त्यसलाई मार् !’ उनीहरू सारा दुनियाँ बिर्सेर मोबाइलमा मग्न थिए। उनीहरू अहिलेको लोकप्रिय इन्टरनेट गेम ‘पब्जी’ खेलिरहेका थिए। उनीहरूमध्येका एक हुन्, मिडिया स्टडिजमा ब्याचलर्स गर्दै गरेका काठमाडाैँका मनीष कोइराला। साथीहरूसँग उनी भन्दै थिए, ‘केटाहरू हो, मलाई त यो गेम खेल्न थालेपछि ट्वाइलेट पनि जान नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।’ दोलखाबाट फार्मेसी पढ्न आएका अर्का युवा निश्चल बस्नेत मनीषलाई जिस्काउँदै भन्दै थिए, ‘ट्वाइलेट जान मन नलागो क्याथेटर लगाएर युरिन ब्यागमा पिसाब जम्मा गर् न त।’ इटहरीका युवा सुशान्त भण्डारी भने उनीहरूसँग दुखेसो पोख्दै थिए। ‘म सोझो मान्छेलाई पन
केटाहरु कन्डम प्रयोग गर्न किन मान्दैनन् यस्तो छ कारण !
एजेन्सी । अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले अमेरिकी युवाले यौन सम्पर्कको समयमा कन्डमको प्रयोग गर्ने रुचिमा कमी आएको देखाएको छ।इन्डियाना विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले युवामा कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता घट्दै गएको देखाएको हो। सन् २००२ देखि २०१० सम्ममा आफ्नो पहिलो यौन सम्पर्कको समयमा करिब ८० प्रतिशत युवाले कन्डमको प्रयोग गर्ने बताएका थिए। तर हालै गरिएको अध्ययनले सो संख्या घटेको देखाएको छ। उक्त अनुसन्धानका प्रमुख डेबी हेर्बिनिकले युवामा कन्डमको बारेमा गलत धारणा रहेको तथा उनीहरुमा गर्भ रोक्न मात्र कन्डम प्रयोग हुने बुझाइ रहेको बताइन्। साथै उनले युवाहरुमा यौन सम्पर्कको समयमा कन्डमको प्रयोग गर्दा पूर्ण रुपमा सन्तुष्टी पाइँदैन भन्ने गलत धारणा रहेको बताइन्। ‘कन्डम गर्भ रोक्न मात्र प्रयोग गर्ने होइन, अहिले महिलाहरु असुरक्षित गर्भ रोक्न पिल्स तथा अन्य गर्भ निरोधक साधन प्रयोग गर्छन् जुन र
यो हो सुन्दर अविवाहित महिलाहरूले भरिएको गाउँ, जहाँ पुरुषलाई ‘नो इन्ट्री’
एजेन्सी। दक्षिण पूर्वी ब्राजिलस्थित नोभा डो कोर्डिरो सिटी सुन्दर महिलाको सिटी भनेर चिनिन्छ । जहाँ २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका अविवाहित महिला मात्र बसोवास गर्दछन् । ६ सयभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यस गाउँका महिलाले विवाहका लागि योग्य पुरुषलाई मात्र आफ्नो घरमा आमन्त्रण गर्ने गरेका छन् । ,सौर्य दैनिकमा समाचार छ । महिलाको प्रभुत्व रहेको यस गाउँमा पुरुषलाई अनुमतिविना प्रवेश निषेध छ । यस गाउँका छोरा किशोरहरूलाई १८ वर्ष पुग्नेवित्तिकै गाउँबाहिर पठाइन्छ भने अलि वयस्क सप्ताह मनाउन मात्र घर फर्किन्छन् । ‘यहाँ भेटिने पुरुष या त विवाहित हुन्छन्, या त आफन्त । जसले गर्दा हामी महिला सिंगल ( अविवाहित ) बस्नुपर्छ । मैले अहिलेसम्म कुनै पनि पुरुषलाई चुम्बन गर्नसम्म पाएको छैन ।’ २३ वर्षीय नेल्मा फेर्नान्डिजले भनिन् । ‘हामी अविवाहितहरू मायामा फसेको र विवाह गरेको कल्पना मात्र गर्छौं । विवाहका लागि केटा खोज्न आफ